Ogaden News Agency (ONA) – Xayiraadii Socdaalka ee Trump oo Qoysas Badan Saamaysay.
Xayiraadii Socdaalka ee Trump oo Qoysas Badan Saamaysay.
Posted by ONA Admin	/ April 16, 2018
Intii uu Trump hayay xilka madaxtinimada ee Maraykanka waxaa hoos u dhacay qaxootiga laga diiwaan galiyo dalka, balse maxaa ku dhacay qoysaska xayirmay iyaga oo uu dhexda u marayo barnaamijka dib u dejinta.
Maxamed Chaghlil oo 35 jir ah oo ku sugan magaalada New Haven ayaa maalin kasta waca hooyadii oo waayel ah. Waxa ay weydiisaa in uu u dadaalo naftiisa iyo qoyskiisa, isagana waxa uu weydiiyaa in ay qaadatay dawadeeda waxa uuna ka ballan qaadaa in ay mardhow isku meel ku noolaan doonaan.
Maxamed iyo qoyskiisa ayaa bishii 12aad ee 2012 ka soo cararay dagaalka sokeeye ee Suuriya. Waxaa qaxooti ahaan loo geeyay Jordan waxa ayna codsadeen in mareykanka dib u dajin laga siiyo. Sanaddi 2016 waxaa geeriyooday maxamed aabihii. Wax yar un ka dib geerida aabihii Maxamed waxaa loo ogolaaday in uu u socdaalo Mareykanka.
Go’aan adag ayuu ahaa, balse maxamed iyo hooyadii ayaa aaminsanaa in wakhti dhow ay hal meel kuwada noolaan doonaaan. sidaa darteed Maxamed waa uu safray, waxa uuna Mareykanka tagay dhowr toddobaad ka hor inta aan la dhaarin madaxweyne Trump.
Haseyeeshee Maxamed hooyadii hadda waa garoob ninkeedii dhintay, taasi oo micneheedu yahay in marlabaad codsi cusub loo sameeyo. Kadib waxaa dhacay mamnuuciddi Trump ee qaxootiga oo waxaa la joojiyay gabi ahaanba qaxootiga suuriya. Haatan sanad iyo ka badan ayay wali maxamed hooyadii sugeysaa in mar ay tagto Mareykanka oo ay wiilkeeda la noolaato.
Maamulka Trump ayaa joojiyay barnaamijkii qaxootiga si Mareykanka looga helo amni la isku haleyn karo. Balse iyadoo haatan la qaaday xannibaadihii socdaalka ayaa wali qoysas badan sugayaan in ay hal meel ku noolaadaan.